Boğaçay 38 Gantaal Lagu Soo Bandhigay Xaflad | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulBoğaçay 38 Xusuus-qor
12 / 01 / 2020 34 Istanbul, GUUD, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
bogacay trailer ayaa la galiyay
Wasiirka Turhan, khudbaddiisa ayuu ka sheegay xafladdii lagu soo bandhigayay markab nooca xamuulka qaada ah oo ay wadatay shirkadda Sanmar Shipyard, wuxuuna sheegay in mar howsha markabku ku xayiran yihiin ku dhowaad Tuzla, iyo in maraakiibta Turkiga ay soo mareen xilliyo adag.
ay shaqada dib u soo noolaynaysa waaxda badaha Turhan sharxay in ay heleen kaalinta wanaagsan ee maanta, "Turkey, quruunta Turkish, waxaan leenahay oo dhan cayn kasta oo taageero folks ka shaqeynayaan xusuusan baxriyiintii. Annaga oo ah wasaaradda badahaheena, waxaan sameynay waxkasta oo loo baahan yahay si loo nadiifiyo jidka maraakiibtayada. Waxaan gaarnay dadaallo iyo siyaasado aad muhiim u ah. Waxaan sameynay qaban qaabooyin aan ugu gogol xaareyno ganacsiga gaarka loo leeyahay. Waxaan u galnay maraakiibteena liistada cadaanka ah, taasi waa, horyaalnimada ugu weyn oo aan la soconay xisaab xirkii iyo dhaqamadii aan gaarnay. Si aan ula wadaagno culeyska saaran badmaaxeheena, waxaan hirgalinay codsiga shidaalka SCT-ga ah. Laga soo bilaabo 2004, celceliska sanadlaha ah 496 milyan ginni waaxda, waxaan bixinnay ku dhowaad 8 bilyan oo rodol. Tirada dekedaha caalamiga ah ayaa kordhay 152 ilaa 181. Tirada marinnadayada ayaa kordhay 41 illaa 62, awoodda aan u leenahay maraakiibta ayaa kordhay 8 ilaa 500. Maraakiibteena badda ee ay leedahay dowladda Turkiga ayaa kor u kacay in ka badan 19 jeer marka la barbar dhigo 2003 waxayna gaareen 3 milyan DWT laga soo bilaabo 8,9 milyan DWT. Maraakiibteenna 28,6-aad ee ay leedahay dowladda Turkiga ayaa kaalinta 19-aad ka gashay adduunka maanta. Iyada oo la xoojinayo doorka dalkeenna ee maraakiibta badaha adduunka, maareynta haamaha ayaa kordhay 15 jeer waxayna gaartay 5 milyan oo ah TEU. Wadarta xamuulka xamuulku wuxuu ahaa 11 milyan oo tan iyo 190 milyan oo tan. ”
"Maanta waxaan ka mid nahay wadamada hormuudka ka ah warshadaha dhismooyinka adduunka"
Turhan wuxuu tilmaamay inay jireen isbadal ku yimid warshadaha dib u dhiska maraakiibta iyo inay tahay goob istaraatiiji ah oo firfircoon oo ay kujirto badeecooyinkeeda qiimaha badan. Dabeecadda-degdegga ah ee shaqada ee warshadaha-u-dhiska maraakiibta iyo hawlaheeda baaxad weyn ayaa sidoo kale gacan ka geysta kordhinta shaqooyinka. Nasiib wanaagse, maanta waxaan ka mid nahay waddammada hormuudka ka ah warshadaha dhismooyinka adduunka. Tan, doorka maraakiibta ee dhammaan xeebaha Tuzla, halkaas oo ay ku xayiran tahay inay ka ciyaarto door weyn. Sannadihii la soo dhaafay, maalgashiga ay sameeyeen dowladdeenna iyo taageerada naqshadeynta ayaa la ballaariyay, muddada heshiiska kireysiga ee maraakiibta ayaa kordhay 49 sano, furitaanka maalgashiga, dowladdu waxay bixisay kumanaan dakhli halkii ay kirada bixin jirtay, ka saarista waajibaadka bixinta ecrimisil-ka, maraakiibta safka hore ee amaahda. iyo ansixinta warbixinnada EIA iyo qorshayaasha horumarineed ee maraakiibtayada. ”
Turhan wuxuu sheegay in warshadaha dhismooyinka Turkiga ay noqdeen waax muhiim ah oo awood u leh sameynta maraakiibta xasaasiga ah ee deegaanka iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyadii ugu dambeysay isla markaana 81 markab ay mudan yihiin mahad celin.
Isagoo carrabka ku adkeeyay in R & D iyo hal-abuurka ay tahay in la horumariyo si fikrad looga helo suuqa adduunka, ayuu yiri Turhan, inden Mid ka mid ah tusaalooyinka ugu wanaagsan ee shaqadan waa BOĞAÇAY 38 Hybrid Tugboat.
Waxaa ka mid ah astaamaha kale ee teknolojiyada tug-ga, aad ayey muhiim u tahay inay lahaato AVD-ta adduunka ugu horreysay, nidaamka fidsan ee firfircoonida firfircoonida sare. Guusha Sanmar, dabcan, maahan shil. Sanmar waa hormuud adduunka ka dhisan oo dhistay gaas dabiici ah kii ugu horreeyay ka dibna gaaskii ugu horreeyay ee madaxbannaan. Maanta, gogoshii ugu horreeyay ee alwaax-dhiska ah oo mid kale lagu dhiso magaca waddankeenna iyo waaxdeenna waa mid ku faanta xaaladda.
Nooca ugu horreeya adduunka ee 'Hawydul Hybrid' matoor wata teknolojiyad Sare oo Kala duwan oo Varaable Drive
Gantaalkii laga dhisay Sanmar Altınova Shipyard waxaa lagu dhisay iyadoo lagu dhex darayo tikniyoolajiyada Varaable Drive Advanced ee matoorka.
Hal-abuurnimadaan, oo ay si wada jir ah ula horumarin doonaan Masruufka 'Caterpillar Propulsion', waxay yeelan doonaan qiiq yarayn iyo isticmaalka shidaalka oo hooseeya. Tuubada, oo ay soosaaray ABS oo wareegi doonta calanka Turkiga, waxaa lagusoosaaray moodel si buuxda kombiyuutar loo qaatay.
BOĞAÇAY, oo dhererkeedu yahay 24 mitir, waxay leedahay awood jiidis ah oo ah 70 tan waxayna leedahay nidaam wax soo saar oo ku wareegi kara dhidibkeeda, waxay leedahay awood bakhtiinta dabka 2 tan saacaddii.
Mudane Ali Gürün, gudoomiye ku xigeenka gudiga Sanmar wuxuu cadeeyay in BOĞAÇAY 38 loo dhoofin doono Mexico.
Wasiir Turhan ayaa booqday maraakiibta dagaalka
Turhan, Sanmar Shipyard oo leh nidaamka fidinta heerka sare ka dib xafladda xil wareejinta ee Altinova Besiktas Shipyard, Hat-San Shipyard iyo Warshadaha Ganacsiga iyo Ganacsiga ee Altinova Shipyard ayaa lagu wargaliyay shaqada la qabtay.
Ankara 'bullark' oo ku taal hindisada!
Guddiga Sayniska oo baaraya mashruuca Boğaçayı
Telefoonada cusub ee loo yaqaan "Yenimahalle-Sentepe" ayaa loo adeegsaday
Balıkesir Gökköy Xarunta Suuq-geynta ee Adeega
Buundada ku taalla dooxada Ashkarbeyli waxaa loo adeegsaday xaflad
Adeegga Mente Intercity Bus Station Adeega
Boğaçay 38 Dabaal
Hydraulic Hybrid Tighterat